We Fight We Win. -- " More than Media ": ကုလသမဂ္ဂ၏ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေး နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာများ ထောက်ခံ
ကုလသမဂ္ဂ၏ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေး နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာများ ထောက်ခံ
Burma's War Criminals
War Crime Genocide- Crimes Against Humanity
"Supports creation of U.N. commission of inquiry into war crimes in Burma"
For centuries such crimes were committed against millions of victims around the world, yet few of the perpetrators have been brought to justice. Now, with the establishment of the world's first permanent International Criminal Court, individuals will be held accountable for the most serious atrocities against human dignity: war crimes, crimes against humanity and genocide. In addition, the Court will also deal with the crime of aggression once it is defined.
(International Criminal Court )
မြန်မာ စစ်အစိုးရ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် လူသား မျိုးနွယ် အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ် မှုများကို စုံစမ်း စစ်ဆေးမည့် လွတ်လပ်သော ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေးကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ထောက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းအပေါ် နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာများ၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့အစည်းများက အပြည့်အ၀ ထောက်ခံကြောင်းထုတ်ဖော် ပြသရန် မိမိတို့နေထိုင်ရာနိုင်ငံများတွင် ဆန္ဒပြပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ် ကြတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာပြည်ဖွား ညီအကို မောင်နှမများခင်ဗျာ-မြန်မာပြည်ကို စစ်ကျွန်ဇာတ်သွင်းနေတဲ့ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်သစ်တွေရဲ့ လူသား မျိုးနွယ် အပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ် မှုများရပ်တန့်ဖို့၊ ၈ လေးလုံး၊ ဒီပဲယင်း၊ရွှေဝါရောင် ဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုမှုအရေအခင်းတွေ၊ နားဂစ်သဘာဝဘေး ကပ်ဆိုးကြီးတွေမှာ ရာဇ၀တ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ပြီး ရာဇ၀တ် ဘေးက ရှောင်ပြေး နေကြတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံက စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကို အရေးယူနိုင်ဖို့ မိမိတို့ရောက်ရာနေရာကနေ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကိုဘိသိတ်ပြုတဲ့ပုံစံနဲ့တောင်းဆိုတယ်ဆိုရင်တော့-ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့ တောင်းဆို ချက်ပဲ။တရားခံဖြစ်မယ်တောင်းဆိုချက်ပဲ။
Bravo... please make it happen, this is what we waiting for. Despite of whether bring them to justice, let the Criminal General knows they can run but they can't hide.
ဒီမိုအရှူးတွေ အရည်အချင်းမှရှိတော့ သူများကဟုတိဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းလေး စာလေးထုတ်လိုက်ရင် ညီမတွေ၊အမတွေ၊ အမေတွေ ပေးချင်စိတ်တွေတခါတည်းပေါက်ပြီး ပျော်နေတော့တာပဲ။ နှစ် ၂၀ လည်းကျော်လာပြီး စိတ်ကုးယဉ်လို့ကောင်းနေတုန်း... ရှက်ဖို့ကောက်လိုက်တာ။ မိုးပျက်ိမ ဒေါ်စုကအစ။ ဟိုက ပြန်လွတ်မပေးပဲနောက်ထက် ၁ နှစ်ခွဲဆက်ထားမှ house မှာတင်သေနေဦးမယ်
What the fucking military dog is howling? need poison ???? ha ha
What the fucking military dog is howling?? need poison???
Referred to anonymous 3,
Ha ha thats funny , you called daw su kyi as (myo-pyet-ma).
Do you realize that this myo-pyet -ma is the most famous Burmese on earth. Do you realize she has all the courage and abilities that the whole Burmese army doesn't?
We are not just imagination based on US support of war crime commission. We never give up to bring those ruthless Generals into justice. we promised here all those Criminal Generals have to spend their final days of life in the prison.
REMEMBER WE NEVER GIVE UP.